ကိုရီးယားလူမျိုးသူရ ရဲ့ ကိုရီးယားကြက်ကြော်ဆိုင်သို့အလည်တစ်ခေါက် – YANGON STYLE
ကိုရီးယားလူမျိုး စာဖိုမှုးသူရ ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်တဲ့ Korean Thura ဆိုတဲ့ ကြက်ကြော်ဆိုင်လေးဟာ ဆိုင်ဖွင့်စမှာ ကတည်းက နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မဟာ ကိုရီးယားသူရ ရဲ့ ကြက်ကြော်ဆိုင်ကို သွားပြီး သူ့ဆိုင်မှာ ရနိုင်တဲ့ Menu တွေအားလုံးကို မြည်းစမ်းဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါတယ်။ Korean Thura Chicken ဆိုတဲ့ ဆိုင်နာမည်နဲ့လိုက်ဖက်အောင် ကြက်ကြော် အရသာ အစုံအလင်ရှိပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ စုစုပေါင်း ကြက်ကြော် ၆ မျိုးရှိပါတယ်။
Thura Chicken (Original Taste)
Salt chicken (without sauce) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
8 တုံးကို 3500 တည်းရယ်၊ spicy မို့ sauce က အစပ်ပေါ့၊ sauce တွေ လက်မှာမပေချင်ရင် လက်အိတ်‌တောင်းလို့ရပါတယ်, အရသာက အသားထဲထိဝင်
ပွဲသေးနဲ့ ပွဲကြီးအလိုက်ရှိပြီး ပွဲသေးကတော့ ကြက်ကြော် 8 တုံးကိုမှ 3500 / 4000 ၀န်းကျင်နဲ့ ပွဲကြီးကတော့ ကြက်ကြော် ၁၂တုံးကို ၅၂၀၀ ကျပ်နဲ့ ၆၀၀၀ ကျပ် အသီးသီးရှိပါတယ်။ တကယ့်ကို စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ တဝကြီးစားလို့ရမှာပါ။ 8 တုံးရတယ်ဆိုပြီး အသားတုံးသေးသေးလေးတွေမထင်နဲ့နော် ။ အရွယ်ကအလတ်စားတွေနော်။ ကြက်ကြော်၈တုံး မှာတဲ့အခါ ၄တုံးကို အရသာတစ်မျိုးစီမှာလို့လည်းရပါတယ်။
Thura တို့ဆိုင်မှာ လူကြိုက်အများဆုံး ကိုရီးယားစတိုင်ကြက်ကြော်အစပ်အရသာလေးပါ! Original korea style chicken ကိုမှ အစပ်အပြင်းစားအနှစ်လေးပေါင်းစပ်ထားတာမို့ အစပ်ကြိုက်သူတွေနဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်နေတာပေါ့
Soy Chicken ကတော့ ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ အမှန်တိုင်းပြောရရင် ဆိုင်မှာ သူလေးကို အစားနည်းကြတယ်တဲ့….” ချိုရဲရဲကြီးများလား? ပဲငံပြာရည်ဆို‌‌တော့ အရမ်းငန်နေမလား? ပါးစပ်အရသာ‌တွေ့ပါ့မလား???🤔 ” စိုးရိမ်ပြီး သိပ်မစားရဲကြဘူးထင်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် သူ့အရသာလေးက ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်….လူကို စွဲလမ်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အရသာမျိုးလေး… အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ သူမှ သူပဲ ထပ်စားချင်နေရောပါပဲ။ မြန်မာပါးစပ်နဲ့ အကိုက် အရသာလေးလေးပင်ပင်ရှိချက်က အသက်ပါပဲ။
နောက်ထပ် Recommend ပေးချင်တာကတော့ Korea မှာ အရမ်းကို Popular ဖြစ်နေတဲ့ Galbi ကြက်ကြော်လေးပါ!သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်က အနံလေးက အရမ်းမွှေးနေတာပဲ!လူကို အနံလေးမွှေးမွှေးလေးနဲ့ လုံးဝဆွဲဆောင်သွားတာ! အရသာကတော့ ပြောမနေနဲ့ လျှာပေါ်မှာစွဲနေရောပဲပ
ပွဲကြီးတစ်ပွဲမှာ…ထမင်း ၂လုံးနဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်လာစားမယ်ဆိုရင်တော့ အံကိုက်ပါပဲ။ ဗိုက်တင်းကားသွားနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ပဲခေါက်ဆွဲနဲ့ ကိုရီးယား Menu တွေလည်းရှိပါတယ်။ ပဲခေါက်ဆွဲကတော့ ဆိုင်တွေမှာရောင်းတဲ့ ပဲခေါက်ဆွဲ ပုံစံပါပဲ။ သိပ် မထူးဆန်းပါဘူး။
ကျွန်မကတော့ လှည်းတန်းရောက်တဲ့အခါ သင့်ကို Korea Thura ဆိုင်ကိုအရောက်သွားပြီး စားကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Happy Hour (6pm to 9pm) အချိန်မှာ လာစားရင် ထမင်းတစ်လုံးလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။
ဆိုင်လိပ်စာ- No(507) , ပြည်လမ်း, လှည်းတန်း၊ကမာရွတ်မြို့နယ်။ (Hleden Center နဲ့ မေတ္တာဦးမျက်စိဆေးဆန်းကြား)
☎ဖုန်း -095053207/ 09799900712
DELIVERY လည်းရှိတာကြောင့် ဖုန်းဆက်ပြီး မှာ စားလို့ရပါတယ်နော်။